माइक्रोस्टेशन - Geofumadas बाट एक VBA म्याक्रो को पासवर्ड तोड्नुहोस्
Microstation बाट VBA म्याक्रोको पासवर्ड तोड्नुहोस्
नोभेम्बर, 2016 डाउनलोडहरू, Microstation-बेन्टले
अनुप्रयोगका लागि भिजुअल बेसिक लाइब्रेरीहरूको श्रृंखला हो जुन माइक्रोसफ्टले उपलब्ध गराएको छ, केहि पुरानो शैलीको तर धेरै शक्तिशाली, खास गरी अफिसको संस्करणहरूमा २०१० भन्दा अघि। यद्यपि यो अवस्थित छ, धेरै विकासहरू अब .नेट र अन्य वातावरणमा बनेका छन्; तैपनि, फ्रेम-आधारित विकासहरूका लागि, VBA पर्याप्त व्यावहारिक समाधान हो र Microstation मामला, एकदम सरल। कम्तिमा मैले यसका बारेमा कुरा गरिरहेको सम्झना गरी घिमिरे नक्सा र केहि संग XFM.
यी केही समस्याहरू जुन आज बिहान आएको छ, भर्जिनको राउन्डअबाउटमा दौडिँदा, उष्णकटिबंधीय गृहमा:
मद्दत: मैले VBA चलाउदा, सन्देश देखा पर्दछ:
«यस घटकको लागि इजाजतपत्र जानकारी फेला परेन। यस प्रकार्यतालाई विकास वातावरणमा प्रयोग गर्न यस लाइसेन्ससँग तपाईंसँग पर्याप्त अधिकार छैन। »
यस समस्याको वरिपरि पुग्ने धेरै तरिकाहरू छन्, XM को लागी जारी गरिएको जस्तो माइक्रोस्टेशन पूर्वावलोकन प्याकेज स्थापना सहित। यहाँ समस्या यो हो कि, सम्भवतः जब तपाईं विन्डोज or वा विन्डोज १० को संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै पुरानो शैलीको पुस्तकालयहरू काम गर्दैन र निश्चित रूपमा यो VBA २०१० भन्दा पहिले निर्माण गरिएको थियो।
एक व्यावहारिक तरिका: भिजुअल आधार 2010 एक्सप्रेस स्थापना गर्नुहोस्, यसले कम्प्यूटर धेरै धेरै लोड गर्दैन र OCX नियन्त्रण जुन एक अनुभवी प्रयोगकर्ताले क्यान्ड कन्सोलबाट पत्ता लगाउन र प्रविष्ट गर्न सक्छ थप्न सक्नेछ।
सम्भावना मार्ग Visual Basic Express यो हो.
यदि तपाइँ माइक्रोस्ट जडान जडानबाट चलाउन चाहानुहुन्छ भने, यो लगभग निश्चित छ कि अनुप्रयोगले समायोजन गर्न सक्छ किनकी केहि लाइब्रेरी मार्गहरू परिवर्तन भयो।
एक माइक्रोस्टेशन VBA मार्क्रो चलाउन, V8i को मामलामा र पहिले यो उपयोगिताहरू / मार्क्रो / प्रोजेक्ट प्रबन्धकको साथ गरिन्छ। माइक्रोस्टेशन कनेक्ट को मामला मा, तपाईं रिबन को उपयोगिता ट्याब छान्नु पर्छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म्याक्रो निष्पादित गरिएको छ तर हामी कोड छुन चाहन्छौं भने यसले हामीलाई सुरक्षा विन्डो देखाउनेछ।
यो VBA रहेको पासवर्ड तोक्न सम्भव छ?
अनुप्रयोगहरूको लागि भिजुअल बेसिकको पासवर्ड सुरक्षा कार्यक्षमताले विकासको लागि नियन्त्रण र सुरक्षा उत्पन्न गर्न खोज्दछ, त्यसैले वेबसाइटमा यी चीजहरूको बारेमा सोध्नु ठीक हुँदैन। यद्यपि समाधान मान्नु भनेको यो हो कि हामीले पासवर्ड बिर्स्यौं वा विकासकर्ता टेक्निशियनले चिकनगुन्या दिए र माउस ह्या hung्ग गरे, हेक्स सम्पादक प्रयोग गरेर यहाँ व्यावहारिक समाधान छ।
VBA विकासकर्ता कम्पनीहरू द्वारा अपनाईन्छ, त्यसैले कोड भित्र प्रयोग गरिएको एक्रोनिम पासवर्ड जब एक अनुप्रयोगबाट अर्कोमा परिवर्तन सेट हुन्छ। उदाहरणको लागि, एक्सेल VBA म्याक्रोबाट कुञ्जी हटाउन, एक्रोनिम सामान्यतया DBP = »पासवर्ड is हुन्छ, पहुँचका लागि कुञ्जी DPX =» पासवर्ड »हो। यदि हामीले त्यो स्ट्रि find फेला पार्‍यौं र यसलाई DBP को सट्टा DBR वा DPX को सट्टा DPR जस्तो परिवर्तन गर्‍यौं, बचत गर्दा, कुञ्जी सुरक्षा कमाण्ड अब राम्ररी लेखिने छैन र vba सुरक्षा बिना खोल्नेछ।
यो, हेक्स सम्पादक प्रयोग गरेर सम्पादन / खोज विकल्पमा, हामी स्ट्रिङ हामी खोजिरहेका छौं टाइप गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि BDP, पाठ स्ट्रिङ विकल्पसँग र केस संवेदनशील सक्रिय राख्नुहोस्, निम्न छविमा देखाइएको अनुसार।
हेक्सडेसिमल सम्पादक (हेक्स सम्पादक) को प्रयोग गरेर, यो माइक्रोसेसन .mvba एक्सटेन्सन म्याक्रो खोल्न सम्भव छ र यी चरणहरू पछ्याएर त्यो परिवर्तन गर्छ:
1 XVI32 डाउनलोड गर्नुहोस्
यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ यो ठेगाना; मेरो मामलामा मैले 2.55 संस्करण डाउनलोड गरिरहेको छु, जिपमा कम कम्पाइड गरिएको, तपाइँ यसलाई अनब्लक गर्न र फाईल चलाउनुहोस् xvi32.exe।
2 Mvba अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
यो सिफारिस गरिएको छ, VBA खोल्नु अघि प्रतिलिपि बनाउन। हेर्नुहोस् कि यो कुरा कत्तिको सुरक्षित छ, तपाईं यहाँ हिम्मत हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, मात्र एक मात्र चीज त्यो एक्रोनिम खोज्न को लागी, एक पटक फेला परेको तीन अक्षरहरु मध्ये एक X को लागी बदलिन्छ, र यो सुरक्षित हुन्छ। यससँग, VBA पहिले नै असुरक्षित छ।
जब अनुप्रयोग बन्द गर्नाले तिनीहरू परिवर्तनहरू बचत गर्न सोध्छन् भने, यो संकेत गर्न आवश्यक छ।
एक पटक यो बचत भएको छ, हेर्नुहोस् कि जब तपाईं VBA खोल्नुहुन्छ यसले कुञ्जीको माग गर्दैन, त्यसैले यो नयाँ नयाँ माना assign्कन गर्दछ। यदि पासवर्ड बिर्सिएको प्रयोगकर्ता अझै कम्पनीमा कार्यरत छ भने, तपाईंले जानुहुन्छ र उसलाई टाउकोमा थप्पड लगाउनु पर्छ वा कम्तिमा पनि उसलाई बियरको लागि भुक्तान गर्न जबरजस्ती गर्नुपर्दछ; यदि उहाँ चिकनगुनियाको साथ मर्नुभयो भने, हामीसँग अर्को मिनेट मौन छ।
माइक्रोस्टेशन VBA (mvba) को लागि एक्रोनिम पत्ता लगाउनु, अर्को पहेली जस्तो देखिन्छ। यो एक्सेल वा पहुँचका लागि समान होइन तर सामान्य ज्ञान र धैर्यताको प्रयासको साथ तपाईं यसलाई फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
बचतको मतलब भनेको पासवर्ड थाहा पाउनु असमर्थ छ, हामी तपाईंलाई प्रतीकात्मक सहयोगको लागि एक्रोनिम श्रृंखला दिन्छौं। अवश्य पनि, त्यहाँ सँधै अपराधी वा विजेता हुन्छ, जुन एक XD चार्ज हुन पर्छ। यसको लागि तपाइँसँग डाउनलोड किन्नुपर्दछ क्रेडिट कार्ड वा पेपाल.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो माइक्रोस्टेशन जडान संस्करण - नयाँ ईन्टरफेस को रूपान्तरण गर्नु पर्छ
अर्को पोस्ट Allplan:42017 नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएकोअर्को »
२ जवाफ "माइक्रोस्टेशन VBA म्याक्रोको पासवर्ड तोड्नुहोस्"
जून, 2020 बजे
फेलिक्स फाल्कनी भन्छिन्:
मेरो केसमा, म भत्काउन, मेटाउन वा नष्ट गर्न चाहन्न, शब्द वीबीए पासवर्ड, जुन मलाई चाहिन्छ त्यो मलाई थाहा दिन वा पासवर्ड याद गर्न चाहन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ मोड के हुने थियो?